Ndụmọdụ 5 na Ide Ọdịnaya Ahịa nke Na-akpali Uru Ahịa | Martech Zone
Ndụmọdụ 5 na Ide Ọdịnaya Ahịa nke Na-akpali Uru Ahịa
Mepụta ihe ahịa ahịa dị egwu na-agbadata iji nye ndị na-akwado gị uru. Nke a anaghị eme n’otu ntabi anya. N'ezie, ide ederede ọdịnaya nke ga-aba uru ma nwee mmetụta maka ọtụtụ ndị na-ege ntị bụ nnukwu ọrụ. Atụmatụ ndị a na-enye usoro mmalite maka newbies ma na-enye amamihe miri emi maka ndị nwere ahụmịhe karịa.
Ndụmọdụ # 1: Malite na Ọgwụgwụ N’obi
Firstkpụrụ mbụ nke ịzụ ahịa na-aga nke ọma bụ inwe ọhụụ. Ọhụụ a ga-agarịrị ire ngwaahịa na ọrụ, kama na-elekwasị anya na mmetụta akara ahụ na-ezube inwe n'ụwa.
Nke a ekwesighi ịbụ nnukwu ihe na-agbanwe ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-ere egwuregwu vidio agụmakwụkwọ maka ụmụaka, ha nwere ike ịnwe ọhụụ ịnye egwuregwu agụmakwụkwọ kacha atọ ụtọ na ebe ọ bụla n'ahịa. Nke a nwere ike ịtụgharị n'ime ịdebanye ọdịnaya ọdịnaya na-elekwasị anya n'ihe mgbaru ọsọ ahụ, dịka ọmụmaatụ site na ịde ọdịnaya na-atọ ọchị nke na-akụzikwara onye na-agụ ya ihe na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ a, na-achọ ịkụziri ma nwee obi ụtọ na ndị na-ege ha ntị (ma ọ bụ ụmụ ha na-ege ntị), na-ede akwụkwọ ọgụgụ na-agwụ ike nke azụmahịa, ha ga-ada. Site na ịmalite na njedebe ma nwee ọhụụ, ha na-ebute ụzọ maka mkpọsa na-aga nke ọma.
Ndụmọdụ # 2: Jiri Olu Otu Onye Maka Detuo Azụmaahịa Niile
Mpempe ahịa bụ otu n'ime ohere ole na ole azụmaahịa ga-agwa ndị ahịa ya ozugbo. Ka o siri dị, ọ dị oke mkpa izere ịre ahịa site na kọmitii. Ọ bụrụ na mmadụ iri dị iche iche chọrọ ịnakwere nnomi ahịa ahụ tupu ọ pụta n'ihu ọha, a gaghị enwe olileanya maka ịmepụta ọdịnaya dị mma.
Ọ na-ewe obi ike ịhapụ mmadụ abụọ ma ọ bụ mmadụ abụọ ịkọwapụta ụdị mgbasa ozi ahịa niile. Enwere ihe kpatara ụlọ ọrụ ji eme ya, nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ. N'ezie, ọ dị mma ilebanye anya na ahịa azụmaahịa na mbụ. Nke a abụghị echiche na-enweghị isi na enweghị nlekọta, ọ bụ naanị ihe ncheta iji kwado usoro "aka" mgbe ọ bụla enwere ike.
Ndụmọdụ # 3: Lekwasị anya na Ntugharị
Mmasị na echiche dị mma, mana azụmaahịa enweghị ike ịdịgide naanị ịbụ onye ama ama. Tụọ ihe ịga nke ọma nke ihe ahịa na-adabere na otu ha si gbanwee atụmanya ọhụrụ n'ime ịkwụ ndị ahịa ụgwọ.
Malite na njikere ịnwale na ịchọpụta. Dị ka ntanye # 2 kwuru, hapụ ka mmadụ kwuo ụdị ụda edemede mbụ. Ka oge na-aga ma enwere data zuru ezu iji nyochaa, ọ bụ oge iji nweta ndekọ ọnụ ọgụgụ ma chọpụta ihe omume azụmaahịa nwere ike ime iji melite ntụgharị. Na njedebe, ọ bụrụ na mkpọsa nweta mmadụ zuru oke iji tọghata ndị na-akwụ ụgwọ ahịa, ọ na-arụ ọrụ. Ọgwụgwụ akụkọ.
Ndụmọdụ # 4: Jụọ Ajụjụ
Ndị mmadụ taa na-atụ anya na a ga-etinye ha na mkparịta ụka ahụ. Mgbe ahia mara ha site na ịgwa ha ihe ha ga-eme, ha nwere ike iwe iwe. Kama ịnakwere olu nke ikike, gbalịa ịgwa ndị ahịa nwere ike ịha nhata. Jụọ ha ihe ha chere. Kama ịsị, "soda anyị kachasị mma ma ị kwenyesie ike na ya!", Jiri nwayọ dị ka "Kedu ihe ị chere maka soda ọhụrụ anyị dị ịtụnanya?"
Jụ ajụjụ na-eche ihere na mbụ. E nwere ike ghara iji nke a mara ụlọ ọrụ gị, ọ ga-ewekwa obere mbọ tupu ha amalite ịza. Cheta na ọ dịghị onye na-ahụ ajụjụ ndị a na-azaghị, ha na-ahụ mkparịta ụka sitere na mbọ ndị gara nke ọma.
Ndụmọdụ # 5: Ozugbo Ha Zaghachi, Nọgide Na-ekwu Okwu!
O zughi ịjụ ajụjụ ahụ ma pụọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu onye ahụ na-ede akwụkwọ ahịa, a ga-ekenye onye ọzọ ka ọ na-elekwasị anya na nyiwe mgbasa ozi na-aza onye ọ bụla na-aza ajụjụ.
Ọ bụ ụwa na-eme mkpọtụ, mmadụ niile chọrọ ka a nabata ya. Ihe dị mfe dị ka a "na-ekele gị" site ika akaụntụ nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti a fan n'iji ya gee ntị ma ọ bụ na-akụzi ụzọ na ịzụ gị ngwaahịa.
Ide ederede ọdịnaya bụ usoro dị ogologo oge ga-adị iche maka akara ọ bụla. Gee ndị ahịa gị ntị. Jiri ọdịnaya dị mkpa bịakwute ha, ka otu onye kọwaa ụdị ahịa ahịa gị. Cheta na n’agbanyeghi ihe ga - eme, mgbasa ozi na - apughi imebi na - agaghi amachapụ, yabụ atụla egwu ịnwale echiche di ike. Na njedebe, akara ga-eji kọmpụta ahịa ya iji jikọọ ndị ahịa nwere ike ịtụgharị ha na ndị otu ezinụlọ.
Tags: mgbanwecopywritingndetu ederedeahịa ọdịnaya ahịaahịa oyiriAtụmatụ oyiri ahịaajụjụWritingede ederede
Ọ bụghị naanị na Graham Rand nwere mmasị na teknụzụ, kamakwa ọ bụ onye edemede nwere ịnụ ọkụ n'obi. Ọ na-enyocha mgbanwe mgbe niile na weebụ ma na-anwa ịnwe ihe ọhụụ. Ezigbo ihe atụ bụ nke ya nbanye nduzi weebụsaịtị ebe ọ na-enye nkuzi maka ndị ọrụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Ezi, Onye Ukwu, na Egwu nwere ọgụgụ isi Artificial